Topic: စားသောက်ဆိုင်များ, Café, ဘား
မက်ဒေါ်နယ်မှာမွေးနေ့။ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။ အစီအစဉ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲ။ လူ ၈ ယောက်နှင့်လူကြီးများမှကလေးများ ၅ ကျေးဇူးပြု၍ McDonald's ၏“ ပျော်စရာစက်ရုံ” McDonald's တွင်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီမှာကြည့်ပါ။ ကုန်ကျသည် ...
စားသောက်ဆိုင်ဖော့ဆို့ကြေးဘယ်လောက်ပါလဲ? * Cork collection သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှဖောက်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်မိမိတို့၏အရက်ကိုယူဆောင်လာရန်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာပေးဆောင်ရသည်။ စားသောက်ဆိုင်၌အရက်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင်လုံလောက်ပါသည်။
"ပိုးဟပ်လေးခုနှင့်ခရစ်ကက်" သီချင်းကိုမည်သူစကားလုံးများပေးမည်နည်း။ သီချင်းစာသားများ - အမ်ဗစ်ကာ၊ ယူတီဘက်တီကီစကတ်လေးကော့တေးနှင့်လေယာဉ်ကွင်းစာသားအဘိုး၏ကုမ္ပဏီသည်မီးဖို၌မီးဖို၌ထိုင်နေသည်။ သီချင်းများသီဆိုရင်းနှုတ်ခမ်းမွှေးများ ...
မော်စကိုတွင် Michelin ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိပါသလား။ ကံမကောင်းပါဘူး။ Michelin ကြယ်များဖြင့်စားဖိုမှူးပါသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သာရှိသည်။ ဤတွင် http://michelinfood.ru/about-michelin no အကြောင်းရေးသားထားသည်။ ဒါပေမယ့်အများကြီးနှင့်အတူရှိပါတယ် ...
ကဖေးဆိုင်ကဘာလဲ။ Antikafe ဟာcoolရာမအေးမြတဲ့အရာပါ။ ဒါကိုတီထွင်ခဲ့တာကကြီးတယ်။ အနှစ်သာရသည်အဓိကအားဖြင့်တည်ရှိသည်မှာထိုတွင်သင်ကကဖေးနယ်မြေတွင်သင်အသုံးပြုသောအချိန်အတွက်သာပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီကဖေးမှာ ...
အဘယ်အရာကိုကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သနည်း ?? ယစ်မူး: မူးယစ် - အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါး။ ဥပမာအားဖြင့် - ခေါင်းမာတဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ပူဖောင်းတွေကိုရောင်းမလားမေးတယ် CHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO သင်ပြောသောစကားလုံးသည် ... -
မော်စကိုရှိဘူဖေးများရှိသည့်ကဖေးများအကြောင်းပြောပြပါ ဦး ။ shesh besh ဟုတ်ပါတယ်, စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဘူဖေးရှည်လျားသောဖောက်သည်များ၏အကြိုက်ဆုံးအစဉ်အဆက်ဖြစ်လာသည် ... ဘူဖေးကဖေးများရုရှားနှင့်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အတော်လေးလူကြိုက်များ ...
ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းအရက်နှင့်အတူထိုင်နိုင်သည့်မော်စကိုရှိနေရာတစ်ခုကိုပြောပြနိုင်မလား။ McDonald's ငါ http://www.restoclub.ru/blogs/2/74702/ လိပ်စာနှစ်ခုကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ မော်စကိုတွင်ထိုကဲ့သို့သောနေရာများမရှိပါ။ နေရာတိုင်း။ အဓိကကတော့အစေခံစားပွဲထိုးနဲ့သဘောတူဖို့ပါ။ gt; ထိုကဲ့သို့သော ...
Michelin ကြယ်တစ်လုံးကိုသင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မည်သည့်အထူးအောင်မြင်မှုများရနိုင်မည်နည်း။ Yah? ငါလုပ်သောကြယ်သုံးပွင့်ရှိသည့်နေရာ - မှန်ပါသည် - ကြယ်သုံးပွင့်သာစားသောက်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
Lounge ဘားဆိုတာဘာလဲ။ အဆိုပါ Lounge ဘားအင်္ဂလိပ် lounge lounge, Lounge မှ၎င်း၏အမည်ကိုရရှိသွားတဲ့။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်အထူးသီးခြားlရိယာတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည် Melodic light music မြည်သံ၊
ဘာဂါဘုရင်ကပရိုမိုကုဒ်ကိုမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။ ဘာဂါဘုရင်တွင်ဘာဂါဘုရင် ၆၇၄၀၇၇ အတွက်ပရိုမိုးရှင်းကုဒ်သည်မည်သူမျှမခက်ခဲပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာဂါဘုရင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးမှတ်ပုံတင်သည့်အခါဤကုဒ်ကိုထည့်ရမည်ကိုဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည်။
စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်လျှင်ဘာလဲ vbatle.ru ၀ င်ရောက်ကြည့်ပါ။ ဒီဟာကနာမည်ကြီးအဆိုတော်နှစ်ယောက်ကြားကရက်ပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတတ်နိုင်သမျှပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်စော်ကားဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ထွက်မြောက်…